Abakhiqizi be-PCB abaqinile China Ifektri nabathengisi be-China abaqinile
Leli yibhodi lesifunda eliqinile lesingu-6 le-rigid-flex le-elektroniki yezimoto. I-PCB eqinile ye-flex isetshenziswa kakhulu kubuchwepheshe bezokwelapha, izinzwa, i-mechatronics noma i-instrumentation, i-elekthronikhi icindezela ukuhlakanipha okuthe xaxa ezikhaleni ezincanyana, nokukhuphuka kwabantu kuyanda ukuqopha amazinga futhi futhi.
4 ungqimba flex eqinile ne PI stiffener
Leli yibhodi lesifunda eliqinile le-4-rigid-flex le-elektroniki yezimoto. I-PCB eqinile ye-flex isetshenziswa kakhulu kubuchwepheshe bezokwelapha, izinzwa, i-mechatronics noma i-instrumentation, i-elekthronikhi icindezela ukuhlakanipha okuthe xaxa ezikhaleni ezincanyana, nokukhuphuka kwabantu kuyanda ukuqopha amazinga futhi futhi.
6 ungqimba eqinile eqinile PCB
Leli yibhodi lesifunda eliqinile le-flex rigs le-6 ledivayisi ye-Optics. I-PCB eqinile ye-flex isetshenziswa kakhulu kubuchwepheshe bezokwelapha, izinzwa, i-mechatronics noma i-instrumentation, i-elekthronikhi icindezela ukuhlakanipha okuthe xaxa ezikhaleni ezincanyana, nokukhuphuka kwabantu kuyanda ukuqopha amazinga futhi futhi.
12 ungqimba eqinile eqinile Flex PCB Rogers & Dupont Material
Leli yibhodi lesifunda eliqinile le-flex rig le-12 lomkhiqizo we-Aerospace. I-PCB eqinile ye-flex isetshenziswa kakhulu kubuchwepheshe bezokwelapha, izinzwa, i-mechatronics noma i-instrumentation, i-elekthronikhi icindezela ukuhlakanipha okuthe xaxa ezikhaleni ezincanyana, nokukhuphuka kwabantu kuyanda ukuqopha amazinga futhi futhi.